Shirka Wada-tashiga Qorshe howleedka 2021-2022 oo ka furmay Baydhabo | Radio Baidoa
Guriga Wararka Maanta Shirka Wada-tashiga Qorshe howleedka 2021-2022 oo ka furmay Baydhabo
Shirka Wada-tashiga Qorshe howleedka 2021-2022 oo ka furmay Baydhabo
Wasaaradda Qorsheynta, Maalgashiga iyo Horumarinta dhaqaalaha Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa maantay ka daah-furtay Magaalada Baydhabo Shirka wada-tashiga qorshe howleedka 2021-2022 ee Istaraatiijiyadda Qaran ee Xalka Waara ee dowlad gobaleedka Koonfur Galbeed .
Wada-tashiga oo socon doonna muddo saddex cisho ah waxaa diirradda lagu saarayaa diyaarinta qorshe howleedka Istaraatijiyada xalka waara ee dowlad gobaleedka Koonfur galbeed Soomaaliya, waxaana ka soo qayb galay masuuliyiin ka socda; Wasaaradda Qorsheynta Qaranka , masuuliyiin ka socda Urur gobaleedka IGAD iyo xubno ka socda wasaaraddaha iyo hay’adaha ay quseeyso xalka waara.
Shirka wada-tashiga ayaa lagu gorfayn doonaa wax ka qabashada mushaakilaadka kala duwan ee dabiiciga ah sida abaaraha, Colaadaha iyo fatahaadaha oo ah kuwa sababa in dadku barakacaan.
Agaasiamayaasha Guud ee Wasaaradaha Qorsheynta Mudane Isaaq Mohamud Mursal ayaa soo dhaweyay daddaalada uu wado Xafiiska Xalka waara ee Wasaaradda qosheynta xalinta mushkiladaha ku saabsan barakaca iyo qaxootiga ku dhibaataysan deegganada Maamulka.
Marwo Zahra Cabdi Maxamed Agassimaha Xafiiska Xalka waara ee Wasaaradda Qorshaynta Qaranka waxa ay hoosta ka xariiqday doorka dowladda Soomaaliya ee Istaraajiyadan iyo dar dargalinta howsha ay qeyb ka yahiin dowlad gobaleedyada sidii loo xoojin lahaa natiijo fiicanna looga gaari lahaa.
“Waxaan u soo gaarnay dowlad goboleedka Koonfur Galbeed si aan KGS la diyaarino Qorshe Hawleed sanadle ah oo ku salaysan Istaraajiyada Qaran ee Xalka Waara. Qorshahaan oo taaban doona ahmiyadaha ugu waaweyn ee arrimaha xalka waara ee gobolka. Barnaamijka diyaarinta qorshe hawleedka sanad laha ah waxaan soo wadnay saddexdii bilood ee u dambeeyey, Koonfur Galbeedna waxay noqon doontaa maamulkii afraad ee aan booqano. Mudada saddexda cisho ah ee aan wada joogno waxaan rajaynayaa in qorshe rasmi ah oo guul looga gaari karo arrimaha Xalka Waara aan isla soo saari doono” ayey tiri Agaasime Zahra Abdi Mohamed.
Mudnae Cabdiqaadir Cumar Baasi Wasiirka Wasaaradda Shaqada iyo Arrimaha bulshada Koonfur galbeed ayaa qeexay muhiimada in dadka barakaca uu saameyay in ay xaq u leeyahiin sida dadka caadiga ah in ay u shaqaysan karaan loona baahan yahay in loo fudeeyo wax walbo ku xiran in ay dadka caadiga ay ka mid noqdan marka waxaan rajeynaa in Istaraajiyada Qaranka iyo iskaashiga mamulka in natiijo xooggan laga gaaro.
Wasiirka Wasaaradda Qorsheynta Koonfur galbeed Mudane Axmed Madoobe Nuuraw oo si rasmi ah u furey shirka ayaa tilmaamay ka maamul ahaan ka qeyb qaadashada Istaraajiyada xalka waara in ay xoojin doonan sida hada si kasii ballaaran maadaama maamulki yahay kan ugu badan barakaca ay ku nool yahiin waana muhiim in la helo xalka looga bixi lahaa dhibaatada barakaca taas oo ah Istaraajiyadan.
“Dowlad goboleedka Koonfur Galbeed waxaa ku sugan 600,000 kun oo barakacayaal ah, taas oo ay sababtay dhowr duruufood oo kala ah; 1. Amni darro 2. Isbadalka cimilada oo dhalisay abaaro, fatahaado iyo ayax 4. Magaalow, in dad badan ay doorbidayaan nolosha magaalooyinka si ay fursad ugu helaan qoysaskooda sida; shaqo, waxbarsho iyo caafimaad. KG waa gobolka labaad oo ay ku soo barakeceen dadka ugu badan oo ay u dambaysay dadkii laga soo barakiciyey gobolada Waqooyi, kuwaas oo gaarayey in ka badan 2,000 oo qoys oo la siiyey dhul ay degaan iyo gargaar” ayuu yiri Wasiir Axmed Madoobe Nuunow.
Xafiiska Xalka waara ee Wasaaradda Qorsheynta Qaranka waxaa ka taageeraya barnaamijkaan Urur gobaleedka IGAD-DRDIP iyo Baanka Aduunka (WorId bank). Iyada oo gaba-gabada wada-tashiga ay kasoo bixi doonaan qorshe howleedka sanadka 2021-2022 ee dowlad gobaleedka Koonfur galbeed Soomaaliya, taas oo waxtar u noqonaysa sidii xal waara looga gaari lahaa Arrimaha muhiimka sida xal u helida Abaaraha iyo barakaca baahsan ee ka jira dalkeena.
Rooble”Soo xulista ergada waxaa si buuxda ugu madaxbanaan Duubabka iyo Bulshada Rayadka ah ee Beesha Kursiga leh lagumana faragalinkaro”
Doorashada 2 kursi oo dhowaan lagu doortay Baydhabo Oo la Laaley
Qarax ka dhacay Deegaanka Awdiinle
Somaliya & AMISOM oo ka wada hadlay qorshaha Somalia kula wareegeyso...
Uganda oo Ciidankeeda ku sugan Soomaaliya uga digtay weeraro